Yusuf Garaad: Nuxurka War Saxaafadeedka Soohdinta Badda
War Saxaafadeed ay maanta soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ee sheegaya mowqifka Dowladda Soomaaliya ee soohdinta badda ee aan la wadaagno Kenya waxaa iigula muhiimsan hal eray oo laba jeer soo laabtay. Ereygaasi wuxuu ku jira weedha labaad iyo midda saddexaad. Halkaan ayaan ku soo guuriyay aniga oo eraygaas khad culus ku muujinaya.
Soomaaliya waxa ay cadeyneysaa , inay WELI ku adkeysaneyso , ayna ka go'antahay kiiska Sharciga iyo dacwada ee Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ee Hague, iyadoo la raacayo heshiiska Qaramada Midoobey ee Qaanuunka badaha (UNCLOS).
Intaa ayaan uga baxay.
Posted by Yusuf Garaad at 20:36:00